Ugu Dambeyn..Axmed Madoobe oo Is Casilaya Dhawaan ! | Xaqiiqonews
Ugu Dambeyn..Axmed Madoobe oo Is Casilaya Dhawaan !
Hadii Axmed Madoobe uusan go’aansan in uu is-casilo si iskiis ah, waxa aan shaki laheyn in uu wajahi doono cadaadisyo iyo waxyaabo ku qasbi doono in uu xakunka iskaga tako.
qofkii si gaar ah ula socda arimaha Jubbland iyo dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey, waxa uu ogaanayaa halka ay ku socoto iyo natiijooyinka la filan karo ee ku saabsan masiirka maamulka waqtigiisa dhamaaday ee Jubbland.
Maanta, ka dib dhammaan kulamadii Axmed madoobe uu la qaatay beesha Caalamka iyo kenya, intaaso dhan ka dib, falanqeeyaasha siyaasadda ayaa isku raacsan in aysan jirin caddeyn ku filan oo Axmed Madoobe siin karta in uu noqda “Madaxweynaha la aqoonsanyahay”.
Sidoo Kale Aqri..Axmed Madoobe Oo Gacanta Ka Shuminaya Uhuru Kenyatta
Marka arintani loo fiiriyo caqli ahaan, Df-ka oo iyadu ah cidda dambiga ka gashay Axmed madoobe-sida uu isaga ku doodaayo-ilaa hadda ma jirto wax eedeyn ah oo loo soo jeediyey.
Marka la isku xooriyo dhammaan waxyaabaha hadda socda, waxa ay arintu ku biyo shuban doontaa in la sameeyo doorashooyin cusub taasi oo dhici karta ka dib marka Axmed Madoobe lagu cadaadiyo in uu is-casilo.